စမတ် Scan ကို - QR & ဘားကုဒ် Scanner အခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » စမတ် Scan ကို - QR & ဘားကုဒ် Scanner အခမဲ့
စမတ် Scan ကို - QR & ဘားကုဒ် Scanner အခမဲ့ APK ကို
စမတ် Scan ကိုအဓိကဘားကုဒ်ကိုပုံစံများအမျိုးမျိုးတို့ကိုထောကျပံ့တဲ့အစွမ်းထက်ဖို့အတွက် QR စာဖတ်သူကို & ဘားကုဒ် Scanner ။ ! မတ် Scan ကိုသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်တစ်ဦးသိပ်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းအတွက်ကုဒ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကြိုးစားပါ, ရိုးရှင်းစွာ QR သို့မဟုတ်သင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့နဲ့ app ကအလိုအလျောက် detect နှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်လိုခငျြဘားကုဒ်ကိုထောက်ပြ။ မည်သည့်ခလုတ်နှိပ်ဖို့မလိုအပ်ရုံဓါတ်ပုံယူပါ။
စမတ် Scan ကို၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
- In-One အားလုံး-: Links များရရှိရန် QR codes တွေကိုနှင့်ဘားကုဒ်များ (အားလုံး 1D & 2D ကုဒ်အမျိုးအစားများ) စကင်ဖတ်, စာသား, ဆက်သွယ်ရန်အင်ဖို။ တဦးတည်း- touch. -စမတ် & -Fast အတွက်စသည်တို့ကို: သင်၏ QR စကင်ရလဒ်များအတွက်အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြစရာ။ ကိုယ့ထိတွေ့ဒါပေါ်တွင်ဖွင့်လှစ်, ခွဲဝေမှုနှင့် Reading ။ (ထောက်ခံအားလုံးရလဒ်အမျိုးအစားများ: URL များကို, စာသား, ISBN, Email, ဆက်သွယ်ရန်, ပြက္ခဒိန်, Geo, ဖုန်းနံပါတ်, SMS WIFI ဆက်သွယ်မှု)
- ဖလက်ရှမီးထောက်ခံ: မှောင်မိုက်ထဲမှာမမှန်ကန်တဲ့စကင်ကိုရှောင်ရှားရန်စကင်ဖတ်ဖို့နေစဉ်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဖွင့်မည်။
- ကြည့်ရန်သမိုင်း: အဆိုပါစကင်ကိုသမိုင်းကိုကောင်းစွာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်, သင်အလွယ်တကူသည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့စကင်ကိုသမိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
- စာရွက်စာတမ်း Scanner ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သငျသညျခရီးဆောင်လမ်းအတွက် PDF files တွေကိုမှစာရွက်စာတမ်းများစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။
: စမတ် Scan ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
QR ကုဒ်ကိုသို့မဟုတ်ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး 1.To, သငျသညျရိုးရိုး, app ကိုဖွင့်လှစ် code ကိုမှာကင်မရာကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့်ကင်နာအလိုအလြောကျကအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်နိုင်ပါတယ်
Scan ရလဒ်၏ 2.For ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုသင်ရွေးချယ်ဖို့အတှကျရှေးခယျြစရာကွဲပြားရှိပါတယ်။ ဥပမာစာသားဖတ်နေ link ကိုမျှဝေ, ဖုန်းနံပါတ်ခေါ်ဆို, e-mail, ပေးပို့ခြင်း, အဆက်အသွယ်အချက်အလက်လာပြီ။ စသည်တို့ကိုသင့်ရဲ့စာရင်းနှင့်ချိတ်ဆက် WIFI အပေါ်
code ကို scan ဖတ်တဲ့အခါမှာ 3.If သင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဖွင့်ဖို့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အနိမ့်အလင်းအခြေအနေမျိုး၌ရှိကြ၏။
4 ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စကင်စံချိန်ပိုကောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့သင်ကူညီနိုင်ခြင်း, စကင်ကိုသမိုင်းကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားပါ။
5 ။ ဒီ app ပါဝင်သည်ပေမယ့်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များကန့်သတ်ထားမဟုတ်: Tag ကိုစာဖတ်သူ, စီးပွားရေးကဒ်ကင်နာ, စာအုပ်စကင်နာ, စတိုးဆိုင်တည်နေရာ, အစားအသောက်စကင်နာ, စျေးနှုန်းကင်နာ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံလင်သောအတှေ့အကွုံထံအပ်နှံကြသည်, သင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောတုံ့ပြန်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်ရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
စမတ် Scan ကို - QR & ဘားကုဒ် Scanner အခမဲ့
12.64 ကို MB
အသံအိပ်စက်ခြင်း Group မှ